वैशाख १६ देखि २२ गतेसम्म ‘लकडाउन’ : के खुल्ने, के नखुल्ने ? (आदेशसहित) - OK Khabar
वैशाख १६ देखि २२ गतेसम्म ‘लकडाउन’ : के खुल्ने, के नखुल्ने ? (आदेशसहित)
ओके खबर १३ बैशाख २०७८, सोमबार २१:२५ मा प्रकाशित ( १ हफ्ता अघि) १३८८ पाठक संख्या
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १६ गते विहान ६ बजेदेखि वैशाख २२ गते राति १२ बजेसम्म अत्यावश्यकबाहेकका सेवा र यातायात बन्द गरेको छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सोमबार साँझ एक आदेश जारी गरी अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सेवा बन्द गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जारी गरेको आदेश अनुसार वैशाख १६ देखि एक हप्तासम्म खाद्य सामग्री औषधी तथा स्वास्ग्य सामग्रीका पसलबाहेक सबै पसल बन्द हुनेछन् । खाद्य सामग्रीको पसल विहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म खुला हुनेछ । डिपार्टमेन्ट स्टोरको ग्रोसरी कक्ष विहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने आदेशमा उल्लेख छ ।